By Tachileik News Agency - September 30, 2008
သစ်ငုတ်တိုအြဖစ်နဲ့​ မတုန်မလှုပ်ဘဝမှာ ​ေနခဲ့​တာ ြကာ​ေညာင်း​ခဲ့​ပါြပီ…. ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ေတွကို မပျက်​ေသာ သစ္စာနဲ့​တည်ြမဲစွာ​ေစာင့်​ဆိုင်း​ဖို့​ အိပ်မက်​ေတွကို​ေပး​ခဲ့​သူ….။
​ေြပာမဆံုး​တဲ့​ မင်း​ရဲ့​သစ္စာတရား​ေတွ အခု​ေတာ့​ ပျက်တုန်း​ေနမှန်း​မင်း​သိလျှက်နဲ့​ ဆက်၍လှည့်​စား​ခဲ့​သူ… ချစ်တတ်တဲ့​စိတ်တစ်ခု​ေြကာင့်​ အတု​ေယာင်​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ေတွကို သိလျှက်နဲ့​ ြကည်နှုး​ေနမိ​ေသာ ချစ်တတ်သူငါက “အ” လို့​ေတာ့​ ဟုတ်ဘူး​ကွယ်… အြပစ်မြမင်နိုင်တဲ့​ ချစ်တဲ့​စိတ်​ေတွ​ေြကာင့်​ငါမင်း​ကို ခွင့်​လွှတ်တတ်ခဲ့​တယ်
အချစ်ရဲ့​ေကျး​ကျွန်​ေတာ့​မဟုတ်ပါဘူး​ကွယ် ​ေမျှာ်လင့်​မထား​တဲ့​အရာ​ေတွကို စိုး​မိုး​ေနဆဲြဖစ်တဲ့​ မြမင်နိုင်​ေနှာင်ြကိုး​ေတွ​ေြကာင့်​ေပါ့​….ထား​လိုက်ပါ​ေတာ့​ေလ ချစ်တတ်သူတိုင်း​မှာ ြပဿဒါး​ဆိုတာ မကင်း​ပါဘူး​ေလ………….
​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​ကို ​ေမျှာ်လင့်​ြခင်း​နဲ့​တူ​ေအာင် ​ေမျှာ်လင့်​ေနဖို့​ ခွန်း​အား​ေတွ မရှိ​ေတာ့​ဘူး​ကွယ်
ဗီလိန် October 1, 2008 at 11:02 PM
ဟုတ်တယ်။ လုပ်စရာရှိတာလုပ်လိုက်။ :)
အိမ် October 2, 2008 at 12:10 PM
၁ဂိုး​ ၂ကမ်း​ ၃ အွန်သည်​ေဝး​ေလ
​ေခါင်း​ေြခာက်ခံစဉ်း​စား​မနဲ့​ ကိုယ့်​ရဲ့​ တန်ဖိုး​ရှိတဲ့​ အချိန်​ေတွ ကုန်တယ်
အလှတရား​ October 5, 2008 at 11:12 AM
ပထမဆံုး​ Tag ​ေလး​တစ်ခု
​ေပး​ဆပ်မှု့​ (သို့​) လိုအပ်ချက်